Fahad iyo Farmaajo oo kireystay haakarro halis ah [MITM] | KEYDMEDIA ONLINE
Fahad iyo Farmaajo oo kireystay haakarro halis ah [MITM]
Qooraansay, wuxuu so noqday Madaxa Xafiiska Maamulka IT ( Information Technology) ee Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sidonka Qaranka, wuxuuna khabiir ku yahay cilmiga tignoolijiyadda.
MUQDISHO, Soomaaliya – Keydmedia Online, waxa ay bartamihii bishii August 2021, heshay xogo hoose oo sheegaya in Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka NISA, ay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho soo galisay mishiinnada wax basaasa, isla-markaana ay soo kireysatay shaqsiyaad ajaanib ah oo ku takhasusay adeegga [A Man in the Middle - MITM], oo ah weerar dhanka internetka ah, oo lagu dhageysto dadka laguna carqaladeeyo adeegyada is-gaarsiinta iyo bangiyada.
Baaritaan muddo dheer ah, xiriirro kala duwan iyo ka xaqiijinta shaqsiyaad xog ogaal ah, oo ay ku jiraan saraakiil hore uga tirsanaa NISA, waxay cadeynayaan in ugu yaraan saddex goobood oo ku yaalla Caasimadda laga taagay ateenooyin, [Madaxtooyada, Habar Kjadiijo iyo Garoonka Diyaaradaha] si loo basaaso xogta dadka ku hadlaya taleefannada, loo cusleeyo xawaaraha Internet-ka isla-markaana loo qalqal galiyo bangiyada iyo xawaaladaha.
Sida ay KON, ku ogaatay u kuur-galidda arrinkaan, ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay ayaa ah in Madaxtooyadu si dhow ula socoto dhaqdhaqaada xubnaha mucaaradaka oo ay ugu horreeyaan Golaha Midowga Musharixiinta, ganacstada ka aragtida duwan Farmaajo, madaxda warbaahinta madaxa bannaan iyo falanqeeyayaasha siyaasadda.
A Man in the Middle – MITM, wuxuu awoodaa inuu dhageysto wicitaannada ama xitaa uu jaro xiriirka labada qof, sidoo kale, wuxuu awood u leeyahay inuu si ba’an u carqaladeeyo lacagaha la isugu diro bangiyada iyo xawaaladaha, isagoo wax ka bedel ku sameyn kara cadadka lacag muwaadiniintu isku diraan, [ka dhimid iyo ku darid].
Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, oo damacooda ugu weyn yahay in ay dib ugu soo laabtaan xilka, ayaa dalka Shiinaha u diray labo sarkaal oo kala ah, Mukhtar Xuseen Maxamed (Qooraansay) iyo Cabdullaahi Kullane, [Kullane Jiis], kuwaas oo soo iibiyay qalabka soona kireeyay haakarro [Hackers] ajaaninb ah.
Bishii la soo dhaafay waxaa si weyn caasimadda looga dareemay cillad dhanka wicitaannada ah, halka sadexdii maalin ee na-weydaartay uu si weyn u liitay Internet-ka Muqdisho, waxaana weerarro dhanka Internet-ka ah , todobaadkii hore ka cabtay dhowr Wasaaradood oo ay ku jirto Wasaaradda Qorsheynta Qaranka.
Sidoo kale, wicitaanka gobollada dalka iyo Caasimadda, ayaa aad u liitay bilihii tagay waxaana cabsho xooggan looga muujiyay adeeggan Internet-ka ee Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe.
Shaqsiga arrinkaan gaanta ku haya ee wakiilka uga ah Fahad iyo Farmaajo, ayaa lagu magacaaba Mukhtar Xuseen Maxamed (Qooraansay), kaas oo billawgii bishii July 2020, Ra’iisul Wasaarihii hore, Xasan Cali Kheyre, uu u magacaabay Maareeyaha Mashruuca Aqoonsiga Qaranka (Managing Director for the National ID Project), si dhidibada loogu taago hay'adda Aqoonsiga Qaranka (National ID Authority).
Mukhtar Qooraansay, oo heysta dhalashada Norwey, waxaa hore logu eedeeyay inuu lacag ka badan hal malyan oo dollar kala baxsady NISA, Hanti-dhowraha guud ayaana ku sameeyay baafin rasmi ah, ka hor inta uusan wadaadka Ictisaam ee Sheekh Maxamed Idirs uusan kala hadilin Farmaajo Fahad.
Sidoo kale, waxaa arrinkaan shaqsiga labaad ka ah eedeysane, Cabdullahi Kullane, (Jiis) oo ku magacaaban Kaaliye Sare oo dhinaca Sirdoonka & Amniga NISA ah.
Tan iyo markii warka la xariira arrinkaan uu si weyn usoo shaac baxay bartamihii bishii hore [October] waxaa magaalada Muqdisho, isaga baxay inta badan Siyaasiyiinta Mucaaradka, kuwaas oo saldhigtay Nairobi.